ပုရိသတို့ရဲ့ နှလုံးစိုင်ခဲကြီး အရည်ပျော်ကျသွားလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ ညို့ယူလိုက်ပြန်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည် – Real Link
ပုရိသတို့ရဲ့ နှလုံးစိုင်ခဲကြီး အရည်ပျော်ကျသွားလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ ညို့ယူလိုက်ပြန်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်
By Cele PhyoPosted on March 7, 2021
သွယ်လျ တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် လေးကို ပိုင် ဆိုင် ထား တဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည် ကို သိ ကြ မယ် ထင် ပါ တယ်..။ သွယ်လျ ပြေပြစ် တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ အတူ လှပ ကြည်လင် တဲ့ အသား အရေ ကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံ တွေနဲ့ ညို့အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင်သူ လေး လည်း ဖြစ် ပါ တယ်..။ဆွဲမက် ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမော စရာ အမိုက်စား ပုံရိပ် လေး တွေ နဲ့ ပုရိသ တွေ ရဲ့ ရင် ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူ ထား တဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် လေးဖြစ် ပါ တယ်..။
သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် နဲ့ အင်တာဗျူး များစွာ ကို လည်း လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများ ဆုံး တင်လေ့ ရှိ တာ လည်း တွေ့ ရ ပါတယ် … . သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာ ကိုယ် အလှ ကတော့ မြင်သူ တိုင်း ငေးလောက် အောင် ကို ညို့ယူ ဖမ်းစား နေတာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။လတ်တလော မှာတော့ သူမရဲ့ အမိုက်စား အလှ တရား တွေ နဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစား ထား တဲ့ အလန်းစား ပုံလေး ကို ဖော်ပြ ထား တာ တွေ့ ရ ပါ တယ်..။
ယခု အခါ မှာတော့ သူမ က ပုံလေး ထဲ မှာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ လှရက် လွန်း နေ ပြီး ပုံ တွေ ကို ပရိသတ် ကြီး အတွက် တင်ပေး ထား တာ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ပုံလေး ဟာ ကြည့်ရှု သူတွေ များ ပြား ခဲ့တာ ဖြစ် ပြီး ပုရိသတွေ အများဆုံး ဝန်းရံ ခြင်း ခံနေ ရတာ လည်းဖြစ် ပါ တယ်..။ချစ် ပရိသတ်ကြီး လည်း ဝင့်ထည် ရဲ့ အမိုက်စား ပုံလေး ကို ကြည့်ရှု နိုင်စေ ရန်ဖော် ပြ ပေး လိုက် ပါ တယ် နော်…။
photo : Goonshain Winnthal
သြယ္လ် တဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ ေလးကို ပိုင္ ဆိုင္ ထား တဲ့ ဆက္ဆီ ေမာ္ဒယ္လ္ ဂုဏ္ရွိန္ဝင့္ထည္ ကို သိ ၾက မယ္ ထင္ ပါ တယ္..။ သြယ္လ် ေျပျပစ္ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ နဲ႔ အတူ လွပ ၾကည္လင္ တဲ့ အသား အေရ ကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး သူမရဲ့ အမိုက္စား ပုံ ေတြနဲ႔ ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္သူ ေလး လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္..။ဆြဲမက္ ဖြယ္ ရင္သပ္ ရႈေမာ စရာ အမိုက္စား ပုံရိပ္ ေလး ေတြ နဲ႔ ပုရိသ ေတြ ရဲ့ ရင္ ကို ဆြဲေဆာင္ ညိဳ႕ယူ ထား တဲ့ အလန္းစား ေမာ္ဒယ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေလးျဖစ္ ပါ တယ္..။
သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ နဲ႔ အင္တာဗ်ဴး မ်ားစြာ ကို လည္း လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚတြင္ အမ်ား ဆုံး တင္ေလ့ ရွိ တာ လည္း ေတြ႕ ရ ပါတယ္ … . သူမရဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာ ကိုယ္ အလွ ကေတာ့ ျမင္သူ တိုင္း ေငးေလာက္ ေအာင္ ကို ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစား ေနတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။လတ္တေလာ မွာေတာ့ သူမရဲ့ အမိုက္စား အလွ တရား ေတြ နဲ႔ ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစား ထား တဲ့ အလန္းစား ပုံေလး ကို ေဖာ္ၿပ ထား တာ ေတြ႕ ရ ပါ တယ္..။
ယခု အခါ မွာေတာ့ သူမ က ပုံေလး ထဲ မွာ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ နဲ႔ လွရက္ လြန္း ေန ၿပီး ပုံ ေတြ ကို ပရိသတ္ ႀကီး အတြက္ တင္ေပး ထား တာ ျဖစ္ပါ တယ္..။ ပုံေလး ဟာ ၾကည့္ရႈ သူေတြ မ်ား ျပား ခဲ့တာ ျဖစ္ ၿပီး ပုရိသေတြ အမ်ားဆုံး ဝန္းရံ ျခင္း ခံေန ရတာ လည္းျဖစ္ ပါ တယ္..။ခ်စ္ ပရိသတ္ႀကီး လည္း ဝင့္ထည္ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံေလး ကို ၾကည့္ရႈ နိုင္ေစ ရန္ေဖာ္ ၿပ ေပး လိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္…။
Previous post ဘစ်ကီနီလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ မိမိုက်လန်းနေတဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာရဲ့ ရင်ဖိုဖွယ် ပုံရိပ်လေးများ
Next post တင်းရင်းဖွံ့ထွားလှတဲ့ သူမရဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတရားတွေကို မြင်သာအောင်ချပြလိုက်တဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ အမို်ကစား ပုံရိပ်လေးများ